सुन्दरताका लागि लेजर - सौन्दर्य - प्रकाशितः चैत्र १६, २०७६ - नारी
सुन्दरताका लागि लेजर
डा. मनीषा सिंह डर्मेटोलोजिस्ट
चैत्र १६, २०७६ सुन्दर हुने इच्छा कसलाई हुँदैन र ? बढ्दै जाने उमेर, घामका किरणसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क, धूलो–धूवाँ, दुर्घटनामा लागेको घाउ, शरीरमा हर्मोनको गडबडीका कारणले अनुहार वा शरीरका विभिन्न ठाउँमा दागहरू देखिन्छन् । छालामा आउने दागमा चायाँ र पोतो साझा समस्या हुन् । यससँगै शरीरमा आउने अनावश्यक रौं पनि एक हो । कुनै पनि दाग शरीरमा देखिएको केही समयमा आफै जान्छ तर केही दाग भने जीवनभर रहन्छ । छालाको आवरणमा आउने यो दाग खासै समस्या नभए पनि सुन्दरता आत्मविश्वाससँग जोडिएको विषय हो । अहिले प्रविधिको विकाससँगै धेरै कुराको सुविधा भएको छ । छालामा आएका यस्ता दागलाई अस्थायी र स्थायी रूपमा हटाउने प्रविधि छन्, त्यसमध्येको एक लेजर पनि हो ।
लेजर के हो ?
लेजर विकिरणको माध्यमले उपचार गर्ने पद्धति हो । यसमा इलोक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडियसनको प्रयोग हुन्छ । विद्युतीय माध्यमबाट परावैजनी किरण निकाली अनुहार वा छालामा आएको चायाँ, पोतो, जन्मजात कोठी, ट्याटु आदि हटाउन सकिन्छ । कुनै पेसा तथा व्यवसायको फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने व्यक्तिको अनुहारमा चायाँ–पोतो आयो, अनुहारमा चाउरी पर्‍यो, ठूला–ठूला कोठी आए भने उसले काम नै गुमाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।
हामीकहाँ उपचारका लागि आउने कतिपयले अनुहारमा आएको दाग, पेटमा देखिएको स्ट्रेचमार्क, केश झरेको कारणले व्यावसायिक जीवनमा विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो गर्छन् । मार्केटिङमा हिँड्नुपर्ने युवा ‘केश झरेर तालु हुन लागियो, काममा समस्या हुन्छ’ भन्दै उपचारका लागि आउने गरेका छन् । आफ्नो रूप र सौन्दर्यलाई मेन्टेन गरिराख्न अहिले विभिन्न उपचार सेवा उपलब्ध भएकाले यसको उपयोग गर्न सक्दा आफूलाई सुन्दर र स्मार्ट राख्न सकिन्छ ।
छालामा आउने दाग मात्र होइन, शरीरमा भएका अनावश्यक रौंलाई हटाउन पनि यो प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ । आँखीभौं, काखीमुनिका रौं, यौनाङ्गमा हुने रौं, केशलाई सामान्य मान्न सकिन्छ तर महिलाका दारी–जुंगा पलाउनु, पुरुषको छातीमा अत्यधिक रौं आउनु, आँखीभौं जोडिने गरी रौं आउनुलाई अनावश्यक रौं आउनु भनिन्छ । यस्ता अनावश्यक रौंलाई शरीरमा कुनै चोट नपुर्‍याई सेलेक्टिभ टस्यु थर्मोलाइसिस प्रक्रियाबाट निकाल्नु नै हेयर रिमुबल लेजर थेरापी हो । लेजर प्रविधि सन् १९६० बाट सुरु भए पनि नेपालमा २००४ तिर मात्र प्रयोगमा आएको हो ।
१) एब्लेटिभ लेजर
२) नन् एब्लेटिभ लेजर
एब्लेटिभ भन्नाले शरीरमा घाउ बनाएर गरिने लेजर हो भने नन् एब्लेटिभ भनेको कतै पनि कुनै चोट नपुर्‍याई लाइट पास गरी गरिने प्रकिया हो । लेजरको विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मेडिकल क्षेत्रमा विभिन्न शल्यक्रिया, विभिन्न रोगको उपचार गर्न तथा शारीरिक सुन्दरताका लागि लेजर गर्न थालिएको छ । पहिले औषधि खाएर वा लगाएर पूर्णरूपमा निको पार्न नसक्ने दाग लेजरको माध्यमले सजिलोसँग नदुख्ने गरी निकाल्न सकिन्छ ।
लेजर गर्दा थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू
शरीरमा मुसा, कोठी, चायाँ, पोतो, दाग, डन्डिफोर, जन्मदाग, ट्याटु, दुर्घटनाबाट लागेका चोटपटकका घाउहरूले मानिसमा आत्मविश्वासको कमी गराएका हुन्छन् । यसबाट मुक्ति पाउनका लागि विभिन्न उपायको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । यसका लागि बजारमा थुप्रै लेजर मेसिन उपलब्ध छन् । इन्डियन, चाइनिज, कोरियन वा अन्य लेजर बजारमा आएका बेला उपभोक्ताले गुणस्तरीय लेजरको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले जहिले पनि लेजर गर्नेबारे सोच्दा कहाँ गर्ने, लेजर गर्ने ठाउँमा कस्ता चिकित्सक छन् ? लेजरको विषयमा राम्रो ज्ञान छ वा छैन भन्ने जानकारी प्राप्त गरेर मात्र लेजर गर्नुपर्छ । लेजर गर्दा छाला बिग्रिने हो कि, क्यान्सरजन्य रोग लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । गुणस्तरीय लेजर गर्ने ठाउँ नभएको र चिकित्सकमा लेजरसम्बन्धी राम्रो ज्ञान नभएको खण्डमा छालामा समस्या देखिन सक्छ । चिकित्सकसँग परामर्श गरेर लेजर गर्दा राम्रो हुन्छ ।
कुन समस्यामा कुन लेजर गरिन्छ ?
लेजर विधि सबैभन्दा कम चोट लगाएर सजिलो तरिकाबाट उपचार गर्ने विधि हो । यसमा मिनिमल इन्भेजिभ सर्जरी गरिन्छ । बिरामीलाई बेहोस नबनाई जुन ठाउँमा समस्या भएको हो त्यही ठाउँको छालालाई मारेर टिस्यु निकालिन्छ । लेजर गर्दा कति शक्तिको कुन लेजर कुन टिस्यु फाल्न प्रयोग गर्दैछु भन्ने जानकारी हुनुपर्छ । शरीरमा रहेका अनावश्यक रौं निकाल्दा, कुनै दाग, कोठी, खत हटाउन विभिन्न प्रकारका लेजर प्रयोग गरिन्छ । कालो कोठी, शरीरमा पलाएको मुसा फाल्नका लागि कार्बनडाइअक्साइड
लेजरको प्रयोग गरिन्छ भने छालामा भएको
ट्याटु हटाउन एनडी याग लेजरको प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै विभिन्न ठाउँको समस्याका लागि विभिन्न प्रकारका लेजरको प्रयोग गरिन्छ । लेजर एकपटक मात्र गरेर दाग हट्दैन । त्यसैले दागको प्रकृति हरेर ४ देखि ६ पटकसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । थोरै दाग भएकाले कम र धेरै दाग हुनेले धेरै पटक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रत्येक पटक लेजर गर्दा सकारात्मक परिवर्तन देखिनु आवश्यक छ ।
चाउरीपनका लागि उपयुक्त बोटक्स
चाउरीपन हुनुका विभिन्न कारण हुन्छन् । एजिङ फ्याक्टरका कारण हुने चाउरीपन तथा छालाको स्याहार–सम्भारमा ध्यान नदिएर हुने चाउरीपनको छुट्टाछुट्टै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । चाउरीपन हटाउन दुई थरी उपचार विधि अपनाइन्छ । बोटक्स इन्जेक्सन र लेजरका माध्यमबाट चाउरीपन हटाउन सकिन्छ । बोटक्स महँगो हुने र दीर्घकालीन पनि नहुने भएकाले लेजर गरेर चाउरीपन हटाउने गरिएको छ । कसैको अनुहारमा बोल्दा मात्र चाउरीपन देखिन्छ भने त्यो ‘डाइनामिक’ चाउरीपन हो । जतिबेला पनि देखिने चाउरीपनलाई ‘स्टाटिक’ चाउरीपन भनिन्छ ।
चैत्र २६, २०७६ - गर्मीका लागि हेयर कलरिङ टिप्स
गर्मीका लागि हेयर कलरिङ टिप्स चैत्र २६, २०७६
लकडाउन : महिलाका लागि सौन्दर्यमा ध्यान दिने अवसर पनि हो चैत्र २१, २०७६
बदलिँदो मेकअप ट्रेन्ड चैत्र ५, २०७६